Articles tagged 'securities commission of zimbabwe'
'Stiffer penalties for corrupt execs' 18 July 2014 HARARE - Zimbabwe's capital markets regulator has called on government to amend the Companies Act and make provisions for stiffer penalties on corrupt and fraudulent executives. Willia Bonyongwe, the Securities Commission of Zimbabwe (SecZim) chairperson.
ZSE to impose quarterly reporting 4 November 2013 HARARE - The Zimbabwe Stock Exchange (ZSE), in collaboration with the Securities Commission of Zimbabwe (SecZim), plans to introduce quarterly reporting as part of a set of new listing rules. Alban Chirume, ZSE's chief executive, said the bourse intended to impose the shorter reporting periods...
SecZim 'condemns' share buybacks 27 August 2013 HARARE - Equities market regulator, Securities Commission of Zimbabwe (SecZim), has condemned companies' share buybacks arguing the schemes were exacerbating the liquidity crisis and “keeping the Zimbabwe Stock Exchange (ZSE) obscure”. Tafadzwa Chinamo, SecZim chief executive, said share buyba...